Twitch Nge-Obs ➡ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 7, 2021 0 IiCententarios 355
ukudideka lelinye lamaqonga edijithali asetyenziswa ngabantu abaninzi ukupapasha usasazo ngqo, kwimixholo eyahlukeneyo, kodwa uninzi lwabasebenzisi beliqonga bayayisebenzisa ukugcina ulwazi lwenzeka kwakhona kwimidlalo yevidiyo.
Eli qonga mhlawumbi lelona lisetyenziselwe le njongo, kodwa ngendlela efanayo kunokwenzeka ukufumana ezinye iintlobo zomxholo, ezinje ngeevidiyo zomculo, iividiyo zokupheka, imibuzo kunye neeseshoni zokuphendula. Jongisisa eyakho indima yinkqubo ekuvumela ukuba urekhode isikrini sekhompyuter kwaye uninzi lusebenzisa ukwenza iividiyo zazo ngelixa ngaxeshanye bengcangcazela eqongeni.
Inokuqwalaselwa njani i-Obs ukuba isasaze kwiTwitch
Usasazo ngqo oluboniswe kwiTwitch phantse zihlala zihamba nabantu ababonisa imidlalo yevidiyo kwikhompyuter, kodwa Enye indlela yokwenza ngaphandle kwengxwabangxwaba kukusebenzisa inkqubo ye-OBS. Oku kuyasebenza ngokwenene, kuba kule meko liqonga. Ikuvumela ukuba usasaze ividiyo yeaudiyo kunye nevidiyo ngaphandle kwesandi, kunye nokunxibelelana kwexesha langempela nabaphulaphuli.
Kodwa ukwenza usasazo lweTwitch usebenzisa inkqubo ye-OBS, kufuneka uhlangane neemfuno ezininzi, njengoko kunjalo; Unxibelelwano oluqinisekileyo lwe-intanethi, ngoku ukuba oku kuya kubaluleka ukuba umntu abenakho ukuhambisa ukuhanjiswa komgangatho olungileyo. Kwakhona, ukuba nekhompyuter elungileyo kubalulekile.
Le khompyuter kufuneka okungenani ibe nesizukulwane sesithathu se-Intel Core I5 ​​\_ U200BD processor. Yintoni egqithisile, Kuya kufuneka ufake isoftware, ukusasaza umxholo osetyenziswe kwi-PC, kule meko, yi-OBS.
Qwalasela i-Obs kusasazo kwiTwitch
Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo into yokuba kwinkqubo ye-OBS, umzekelo, kwinqanaba lokumamela, unokwenza izinto ezininzi ezintle. Ingabamba isandi kunye nevidiyo ngexesha lokwenyani elinomgangatho ophezulu kunye nokwakhiwa, kunye nokudibanisa iaudiyo kunye neefilitha, ezenziwe ngumntu, phakathi kwabanye. Inkqubo yokumisela i-OBS imi ngolu hlobo lulandelayo:
Kuyimfuneko ukuba umntu cI-onsig yokukhuphela inkqubo kwiwebhusayithi yayo esemthethweni, Okanye unokukhetha ukufikelela kule khonkco ilandelayo ngqo https://obsproject.com/.
Emva kofakelo, Inkqubo kufuneka ihambelane neqonga ukuze uye kwicandelo "Uqwalaselo".
Pha, iqhosha "Ukukhutshwa" kufuneka libekwe kufuneka ucofe.
Ngoku unganxibelelana neakhawunti yakho yeTwitch kunye naleyo I-OBS ngokucinezela icandelo "lokuDibanisa iAkhawunti".
Iinkcukacha zeakhawunti ziyacelwa, nje ukuba kwenziwe oku, cinezela "Qhagamshela".
Ugqibelele, ngoku unako umsinga ovela kwi-OBS eqongeni nguTwitch.
Ngapha koko, isicelo silula kakhulu ukusisebenzisa, ngokubanzi awuyi kuba nangxaki, kufuneka uqiniseke ukuba ngaphambi kokuqalisa ukuhambisa, ukuba zonke iisetingi zihambelana kakuhle. Ke ukuba uyaqala okanye uqala ukusebenzisa le app, kungcono ukwenza iimvavanyo ezininzi, ukuze kungabikho ngxaki.
1 Inokuqwalaselwa njani i-Obs ukuba isasaze kwiTwitch
1.1 Qwalasela i-Obs kusasazo kwiTwitch
2 Izinto ekufuneka ziqwalaselwe
Ungasasaza njani kwiTwitch nge-OBS?
Ndingazikrwela njani izicatshulwa okanye amagama kuWhatsApp?